तार IČO योजना - Blockchain समाचार
तार च्याट cryptocurrency लागि बहु-अरब डलर IČO योजना
गुप्तिकरण सन्देश सुरुवातमा टेलिग्राम यसको आफ्नै blockchain मंच र मूल cryptocurrency सुरु गर्न योजना, यसको च्याट अनुप्रयोग र बाहिर भुक्तानी powering. धेरै स्रोतहरु अनुसार TechCrunch कुन बोलेको छु, को "टेलिग्राम खुला नेटवर्क" (TON) नयाँ हुनेछ, 'तेस्रो पुस्ता' उच्च क्षमताहरु संग blockchain, पछि Bitcoin र, पछि, Ethereum बाटो छापिएको.
सुरूवात एक भारी प्रारम्भिक सिक्का प्रस्ताव संग वित्त पोषित गरिनेछ, लाखौं सयौं मा लिएर आगामी निजी पूर्व-बिक्री संग, संभावित यो मिति गर्न सबै भन्दा ठूलो ICOs एक बनाउने. माग भन्दा पनि IČO ताजा सुरुवात देखि आ भन्ने तथ्यलाई द्वारा संचालित छ, तार संसारभरि प्रयोग राम्ररी स्थापित सन्देश मञ्च हो.
पावेल Durov लगानीकर्ताले आफ्नो अन्तिम कम्पनी लियो पछि Covet थाह छ केहि सह-संस्थापक र सीईओ - एक homegrown cryptocurrency गोद कुनै पनि सरकार वा बैंक बाट टेलिग्राम भुक्तान सिस्टम भारी स्वतन्त्रता दिन सक्छ, रूसी सामाजिक सञ्जाल VK. Durov यो कथा सन्दर्भमा TechCrunch गरेको धेरै प्रयासहरू उहाँलाई सम्पर्क गर्न जवाफ छैन.
एक व्यापक अपनाए सन्देश अनुप्रयोग भित्र cryptocurrency लागि सम्भावित भारी छ.
टेलिग्राम भित्र cryptocurrency संचालित भुक्तानी संग, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मार्फत रकम पठाउन प्रयोगकर्ता रेमिट्यान्स शुल्क छल्न सक्छ, निजी धन्यवाद अनुप्रयोगका गुप्तिकरण पैसा को ऐसे सार्न, क्रेडिट कार्ड शुल्क को पनि उच्च लाग्न भनेर micropayments छुटकारा, र अधिक. तार पहिले नै वैश्विक cryptocurrency समुदाय लागि डे facto संचार च्यानल छ, यसको आफ्नै सिक्का र Blockchain एउटा प्राकृतिक घर बनाउने.
cryptocurrency को एक टन बिक्री
तार रूपमा धेरै हुर्काउन विचार गर्न बुझ्ने गरिन्छ $500 लाख को दायरामा सम्भाव्य कुल टोकन मूल्य मा पूर्व-IČO बिक्री मा $3 अरब गर्न $5 अरब. तथापि, ती आंकडे IČO अघि परिवर्तन गर्न सकेन, जो मार्च रूपमा बित्तिकै आउन सक्छ. यो संभवतः सबैभन्दा ठूलो निजी गुप्त Tezos पछि मिति उठाउनु ती तथ्याङ्कले बनाउन हुनेछ, जो माथि उठाएको $230 लाख जुलाई मा.
एक IČO एक पूर्व-बिक्री निवेश मा एक न्यूनतम टोपी छ (कहिलेकाहीं छूट संग) ठूलो लगानीकर्ताले आकर्षित गर्न ('ह्वेल') खुद्रा लगानीकर्ताले एक व्यापक टोकन बिक्री अघि. सार्वजनिक, एक IČO को खुद्रा चरण कम जुटाउने tends मानिसहरूलाई सानो ऐसे लगानी को लामो पुच्छर छ किनभने. तर संस्थागत लगानीको संग IČO अगाडि लोड खुद्रा लगानीकर्ताले लागि भरोसा प्रेरित.
ती पूर्व-बिक्री लगानीकर्ताले न्यूनतम को खरीद-मा राख्न आवश्यक हुन सक्छ $20 लाख तिनीहरूले Durov गरेको भित्री सर्कल को बाहिर हुनुहुन्छ भने. स्रोतहरूले IČO खरीद-मा लागि अमेरिकी डलर जस्तै वास्तविक फिएट मुद्रा आवश्यक हुनेछ भनेर भन्न, अरूलाई ICOs मिति छ रूपमा Bitcoin वा ईथर छैन.
शीर्ष-टियर संस्थागत लगानी कम्पनीहरु चासो व्यक्त गरेका छन्, तर Durov आफ्नो नगद स्वीकार को wary हुन भने. पूर्व-बिक्री निर्धारण लागि धक्का गरेका rumored एक दृढ Mail.Ru समूह छ (पूर्व DST), द्वारा रूसी emigre यूरी Milner स्थापित. DST लागि प्रवक्ता यो कथा बारेमा हाम्रो जांच जवाफ थिएन. चाखलाग्दो कुरा, Mail.Ru समूह Durov अन्तिम कम्पनी VK खरीद अप समाप्त कोष छ.
टेलिग्राम खुला नेटवर्क बुझ्न
Durov गरेको विचार एक सम्पूर्ण नयाँ blockchain सुरु गर्न छ, को टेलिग्राम गरेको प्रयोग 180 लाख रकेट इन्धन रूपमा प्रयोगकर्ता बन्द cryptocurrency र टेलिग्राम बनाउन मुख्यधारा ग्रहण मा अगाडी सत्ता, प्रभावकारी, अन्य cryptocurrencies एक kingmaker, किनभने यसको अवस्थित मात्रा को.
टेलिग्राम गरेको सेतो कागज अनुसार TechCrunch को समीक्षा अंश छ, यसको cryptocurrency "ग्राम" भनिन्छ गरिनेछ र सम्भावित टेलिग्राम च्याट अनुप्रयोग बाँधिएको भइरहेको द्वारा तत्काल मुख्यधारा ग्रहण पाउन सक्छ.
स्रोत Durov दुवै एक केंद्रीकृत र decentralized पूर्वाधार संयोजन गर्न निर्णय गरेको छ भन्न, पछि एक पूर्ण decentralized नेटवर्क centralization केही तत्व छ जो एक रूपमा छिटो स्केल छैन, यसैले किन तार यसको आफ्नै blockchain स्वामित्व गर्न आवश्यक.
एक decentralized blockchain मंच सार्ने टेलिग्राम लागि एक पत्थर दुई चरा मार्न सक्छ. साथै अनुप्रयोग भित्र पूर्ण-Blown cryptocurrency अर्थव्यवस्था सिर्जना रूपमा, यो पनि यस्तो इरान रूपमा राष्ट्र-राज्य को आक्रमण र आरोप विरुद्ध यो ढाक्नु हुनेछ, जहाँ यसलाई अहिले खाताहरू 40% इरान इन्टरनेट ट्राफिकको तर अस्थायी रूपमा सरकार विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध बीच रोकिएको थियो.
तार प्रयास र देशमा यसको प्रयोगकर्ता राख्ने एक नाजुक राजनीतिक सन्तुलन कार्य प्ले छ, सरकार को पतन को लागि कल लागि केही च्यानलहरू बन्द हुँदै, अरूलाई राखन गर्दा खुला.
WeChat तर गुप्त संग
टन संग, तार WeChat गर्न cryptocurrency आधारित उपयोगिता akin विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जो एक च्याट अनुप्रयोग भन्दा धेरै मा पलायो र चीन मा धेरै को लागि पूर्वनिर्धारित भुक्तानी संयन्त्र रूपमा कार्य गरेको छ.
जबकि भुक्तानी सेवा को एक किसिम को लागि WeChat धेरै छिटो गर्न सकिन्छ, प्रणाली धेरै केंद्रीकृत रहिरहन्छ. यस्तो TON रूपमा decentralized मंच थप सुरक्षा र लचक प्रस्ताव सक्छ.
स्रोत टेलिग्राम प्रयोगकर्ताहरूले आगामी वालेटमा दुवै टेलिग्राम गरेको मुद्रा र फिएट मुद्रा पकड गर्न अनुमति योजना भन्न.
विद्यमान विकासकर्ता वातावरण टेलिग्राम यसलाई आसपास निर्माण गरेको छ पनि त्यहाँ, जहाँ Bots र सेवाहरू तेस्रो-पक्ष विकासकर्ताले प्रस्ताव गर्दै. फेरि, यहाँ TON सकेजति, सिद्धान्त मा, सबै underly एक डेभलपर टेलिग्राम गर्न दिन्छ.
मा 132 पृष्ठ सेतो कागज, तार चार-चरण योजना उल्लिखित छ:
"TON सेवाहरू" decentralized अनुप्रयोगहरू र स्मार्ट अनुबंध लागि अनुकूल इन्टरफेस जस्तै स्मार्टफोन सक्षम कुनै पनि प्रकारको तेस्रो-पक्ष सेवाहरूमा लागि मंच हुनेछ.
"TON DNS" खाता मानव-पठनीय नाम assigning लागि सेवा हो, स्मार्ट अनुबंध सेवा र नेटवर्क नोड्स. TON DNS संग, decentralized सेवाहरू पहुँच जस्तै हुन सक्छ "वर्ल्ड वाइड वेब मा एक वेबसाइट हेर्दै।"
"TON भुक्तानी" micropayments लागि मंच र micropayment च्यानल नेटवर्क छ. यसलाई "तत्काल बन्द-चेन मूल्य प्रयोगकर्ता Bots र अन्य सेवाहरू बीच स्थानान्तरण" को लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ. प्रणाली भित्र निर्माण सुरक्षा यी स्थानान्तरण "रूपमा-चेन लेनदेन रूपमा सुरक्षित छन्" भन्ने सुनिश्चित गर्न डिजाइन.
को "TON Blockchain" एक मास्टर श्रृंखला समावेश हुनेछ र 2-मा-द-शक्ति-को-92 सँगैको blockchains. यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यो scalability हासिल गर्न "अनंत Sharding नमूना" हुनेछ भनेर छ. यसरी, TON blockchains गर्न सक्षम "स्वचालित रूपमा विभाजित र लोड मा परिवर्तन समायोजित गर्न मर्ज" गर्ने लक्ष्य. यो नयाँ ब्लक चाँडै उत्पन्न हुन्छन् र "लामो लाइनहरू को अभाव कारोबार कम लागत राख्न मद्दत गर्छ मतलब हुनेछ, पनि यदि मंच प्रयोग गरेर सेवा केही व्यापक लोकप्रिय बन्न ".
यो पनि "तत्काल हाईपरक्यूब अनुमार्गण" को blockchain यसलाई बढ्छ पनि रूपमा शीर्ष गति कायम गर्न सक्छन् डिजाइन समावेश हुनेछ. खम्बा दृष्टिकोण यसको प्रमाण भएको 'Byzantine दोष सहनशील' प्रोटोकल को एक भेद मार्फत सहमति पुग्नेछ, फेरि वृद्धि गति र दक्षता. र यो पनि 2-डी वितरण Ledgers प्रयोग गर्नेछ. यो TON कुनै पनि अनावश्यक काँटाहरू बच्न गलत साबित थिए कि कुनै पनि ब्लक को शीर्ष मा नयाँ मान्य ब्लक बढ्न सक्छ मतलब. अर्को शब्दमा, TON 'आत्म-निको' हुन गर्ने लक्ष्य लिएको छ.
TON तेस्रो पुस्ता blockchain एक गतिशील 'खम्बा प्रमाण' दोष सहिष्णुता को एक उच्च डिग्री संग धेरै पक्षहरूबाट सुरक्षित आधारित हुनेछ. यो पनि आईडी भण्डारण ह्यान्डल हुनेछ, भुक्तानी र स्मार्ट अनुबंध. त्यसैले, बरु यसको मुद्रा सिर्जना गर्न काम प्रमाण परेर को, तार नयाँ भर हुनेछ, मूल Bitcoin विधि भन्दा खानी cryptocurrency को कम ऊर्जा-hogging तरिका.
दावी यसलाई लेनदेनको एक अत्यंत उच्च नम्बर सक्षम हुनेछ भन्ने छ, वरिपरि 1 लाख प्रति सेकेन्ड. अर्को शब्दमा, बर्लिन बाहिर Polkadot परियोजनाको महत्वाकांक्षा समान - तर एउटा स्थापित आधार 180 लाख मान्छे. यसले एउटा तथाकथित 'गतिशील sharding संग' interchain 'बनाउँछ.
सेतो कागज पनि ग्राम को आपूर्ति को स्पष्ट चार प्रतिशत बनाउँछ (200 लाख ग्राम) चार वर्ष vesting अवधि टेलिग्राम गरेको विकास टीम लागि सुरक्षित गरिनेछ. तार पनि कम से कम राख्ने "योजना 52 यो speculative व्यापार बाट जोगाउन र लचीलापन कायम गर्न ग्राम cryptocurrency सम्पूर्ण आपूर्ति प्रतिशत ". बाकी रहेको 44 प्रतिशत दुवै सार्वजनिक र निजी बिक्री बिक्रि गरिनेछ.
मुद्रा बाह्य आदानप्रदान सूचीकृत हुनेछ र टेलिग्राम अनुप्रयोग भित्र प्रयोग.
समय-बुद्धिमानी, यस वर्ष को पहिलो क्वाटरमा पनि टेलिग्राम बाह्य सुरक्षित ID को सुरूवात देख्ने, टन को एक एमभिपि पछि. को टेलिग्राम वालेट को सुरूवात Q4 लागि slated छ 2018, र TON आधारित अर्थव्यवस्था सिर्जना Q1 मा सुरु सक्छ 2019. को TON सेवा बाँकी Q2 पछ्याउने थियो 2019.
यस गुप्त समुदायमा केही टन को संदेह रहने. "म सिर्फ लाग्छ यो टेलिग्राम मुद्रीकरण को सीईओ गरेको तरिका हो, मूलतः,"ज्याक्सन पामर भन्छन्, प्रारम्भिक cryptocurrency Dogecoin को संस्थापक.
जापानी सन्देश G ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 8 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार9जनवरी 2018